Xoghayaha Guud Ee Wakiillada Oo Sharaxay Qodobo Mihiima oo lagu Majeerto Xisbiga Kulmiye | Gabiley News Online
Xughayaha guud ee golaha wakiillada Somaliland, Cabdirisaaq Siciid Ayaanle, ayaa xisbiga tallada dalka haya ee KULMIYE, ku ammaanay in xisbigu talo wadaag guud leeyahay, islamarkaana uu isu tanaasulo marka dhexdiisa wax ka dhacaan.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in xisbiga KULMIYE, lixdankii kursi ee uu kulahaa golaha wakiillada uu ogolaaday in lagula tartamo.
Dhanka kale waxaa uu tilmaamay in uu yahay xisbiga kaliya ee aanay is baddelin tirade golihiisa dhexe ee la yaqaano.
Xughaye Cabdirisaaq isaga oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa uu yidhi. “Qaangaadhnimada xisbiga KULMIYE, waa mid muuqata, laba jeer ayuu hantay jagada madaxtinimada ee dalka.
Waxaa lagu doortay waxaa weeyi, xisbiga KULMIYE dhexdiisa ayaa waxaa ka jira wada tashi, waxaa ka jira is qancin, waxaana ku badan qoodha, waanay isu soo noqdaan oo ma kala tagaan.
Xisbiga KULMIYE laba jeer ayuu guddoomiye yeeshay, laba jeerna madaxweyne ayuu yeeshay, maantana doorashadu maaha hebelo halkan jooga ee waxaa tartamaya KULMIYE iyo laba xisbi Qaran”.